Ngokocwaningo olwenziwa angaphandle, u-20% izifo zokunakekela izilwane kubalulekile indlebe izifo. Wonke umnikazi inja ngokushesha noma kamuva ebhekene nale nkinga, futhi ebhekene umbuzo sendlela yokuphatha ezindlebeni isilwane othandekayo wakho.
Izifo indlebe (otitis) kungenziwa ihlukaniswe ukuvuvukala (otitis abezindaba), kanye ukuvuvukala indlebe yangaphandle (otitis) maphakathi nendlebe. Ngeshwa, abanikazi kakhulu ukuqaphela isifo sekukhona mhla kuchithwa igazi livela izindlebe inja ngenxa ukunwaya njalo.
Phakathi kwezimbangela izinqubo sokuvuvukala indlebe zangaphandle, angafakwa ohlwini ezifana supercooling kwamazinga okushisa okubangelwa ongaphakeme, ingress izinhlayiya angangeni indlebe noma amanzi, yokungezwani komzimba kanye neoplasms ahlukahlukene. Ngokukhethekile kufanele kukhokhelwe otodektoz (indlebe batshelwa). Otodektoz ngokuthi endlebeni canal izibungu yisinanakazana (Otodectes). Ukuthuthukiswa otitis kulokhu kwenzeka ngenxa njalo batshelwa ngomnikelo omncane eyenga imfucuza bokuphila, futhi iyisici yesibili. Ngokungafani amakati, izinja otodektoz lingandile.
Otitis indlebe yangaphandle kwenzeka ikakhulukazi izinja esinamadlebe amade futhi eside-onezinwele ezimhloshana, izinja kukhona okhuluphele. Ukunakekela lezi izinja zidinga baqaphele ngokukhethekile, indlebe yokuhlanza kufanele sigcwaliswe njengoba isilinganiso izifo masonto onke.
Ukuvuvukala endlebeni elingaphandle. Izimpawu kanye nokwelashwa
Ukuze inja ngeke besakwazi nanoma yiziphi izinkinga, kubalulekile ukuxilonga izifo ngendlela esifike ngesikhathi. Umnikazi kufanele ukuqhuba ukuhlolwa njalo inja, kuyokusiza ukuba bahlonze izifo ngendlela efanele usaqala futhi ukunquma indlela yokuphatha izindlebe zakho. Uphawu lokuqala kakhulu, okuyinto edingekayo ukuze banake iyona ububomvu kancane isikhumba ezimweni indlebe canal indlebe yangaphandle. Animal ugebisa ikhanda bebheke ubuhlungu kwemizi futhi unikina ikhanda ngapha nangapha.
Uma kwakhiwa isikhumba ukuqina olungaqinile bese ucindezela kumila kuya endlebeni kubangela ubuhlungu oyingozi futhi ephelezelwa squish, isifo Usuqhubekile. Lapho uya e esigabeni njalo lesi sifo, isikhumba meatus sokuzwa sikhula siba anolaka, igebe indlebe is kakhulu ayisesemikhulu. Njengoba otitis ezingamahlalakhona cishe untreatable, umbuzo obalulekile kuhlale of ekuhlonzweni nasekwelashweni ekuqaleni kwalesi sifo.
Indlela esiphatha ngayo izindlebe zakho? Kanjani ukuqala ukwelashwa? Okokuqala, kuzomele uxhumane wezilwane yakho, uyamisa imbangela esikiselwa isifo sekukhona. Ethathwa indlebe sesilwane kanye nokususa kunqunywa i Assay phambi otitis imvelaphi nonparasitic noma yisinanakazana. Lapho uqala ukusebenzisa ekhethekile protivokleschevye otodektoz izidakamizwa bese iphathwa otitis ngqo. Ukuze ekwelapheni abezindaba otitis kubangelwa komzimba noma kahle umzimba izinqubo, kudinga Ukudla okuqinile, nendlebe ketshezi isuswe nge swab ukotini ukunwaya zelenkoj kusetshenzwe.
Ukuvuvukala maphakathi nendlebe. Izimpawu kanye nokwelashwa
Lolu hlobo isifo mkhulu kakhulu kunaleyo ukuvuvukala indlebe yangaphandle. Phakathi ukugula, kungasithena ubomvu, ikakhulukazi ukuphathwa ngasekupheleni noma azilungile. Zahlakazeka zahlala ukwesaba ukuvuvukala indlebe wangaphakathi bese ubuchopho. Lokhu kwenzeka ngokuvamile kakhulu amakati ngenkathi isebenza otodektoz. Lapho ubovu ukuvuvukala indlebe kungaba inja imfiva, ubuhlungu ukuphendula, zincishiswe noma angafuni kudla. Ubovu ukuvuvukala ngokuvamile asymptomatic.
Khumbula ukuthi kubonakaliswa lokuqala otitis udinga ukuthola vet ukwelapha izindlebe lesilwane sakho sasekhaya.